कप्तान ज्ञानेन्द्रसहित चार जनालाई क्यानले किन सोध्यो स्पष्टिकरण ? के गल्ती गरे खेलाडीले ? « Etajakhabar
कप्तान ज्ञानेन्द्रसहित चार जनालाई क्यानले किन सोध्यो स्पष्टिकरण ? के गल्ती गरे खेलाडीले ?
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले राष्ट्रिय टोलीका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित चार खेलाडीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ । कप्तान ज्ञानेन्द्रसहित उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सोमपाल कामी र कमलसिंह ऐरीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको क्यानका कार्यबाहक सचिव प्रशान्तविक्रम मल्लले बताए ।
“चार खेलाडीले मिडियामा गएर बोल्नु भएको थियो । त्यस विषयमा के कस्तो कारणले मिडियामा गएर बोल्नु परेको हो भनेर क्यानले सोधेको छ,” मल्लले भने, “पत्र पाएको ६ दिनभित्र जवाफ पठाउनू भनेको छौं । उहाँहरुले कस्तो जवाफ दिनु हुन्छ त्यो हेरेर हामी अर्को निर्णय गर्नेछौं ।”
खेलाडी बर्गीकरणका विषयमा कप्तान ज्ञानेन्द्रसहित चार जनाले एक अनलाइन सञ्चार माध्यममा भिडियो अन्तवार्ता दिएर असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले अभिभावक संस्था क्यानले विभेद गरेको आरोप लगाएका थिए ।
त्यही विषयलाई विषयलाई कारण देखाउँदै क्यानले खेलाडीलाई स्पष्टिकरण सोधेको हो । क्यानले अप्रिल २०२१ देखि डिसेम्बर २०२१ सम्मका लागि खेलाडी वर्गिकरण गरेको थियो । त्यसमा खेलाडीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
अचम्मको संयोगः शनिको प्रिय राशिमा बनिरहेको छ पञ्चग्रही योग, यी ३ राशिलाई सेयर र व्यापारमा लाभ हुने प्रबल सम्भावना
वैदिक ज्योतिषशास्त्रका अनुसार जब कुनै ग्रहको राशि परिवर्तन हुन्छ वा ग्रह संयोजन बन्छ, त्यसले प्रत्यक्ष